solontenan’ireo mpikambana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ao amin’ny Club des Partenaires Association Barea Can 2019 nahitana ny Mjs, Star sy Telma efa mpanampy ny baolina kitra hatrizay, ny banky Bni, ny Jovenna ary ny Canal + « partenaire du football dans le monde ». Raha atao bango tokana ny nambaran’izy ireo teo anatrehan’ny mpanazatra nasionalin’ny Barea, Nicolas Dupuis sy ny mpanao gazety maro tamin’io omaly io dia azo fintinina amin’ny teny hoe « Hiray fo sy hifampitantana miaraka amin’ny fanohanana hatramin’ny farany ny Barean’i Madagasikara izy ireo ho tafita lavitra araka izay tratra amin’ny fiatrehana ny CAN 2019 izay sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra mba handray anjara amin’izany ny Malagasy. Mbola nampian-dRtoa Rosa Rakotozafy « Tale Jeneralin’ny Spaoro Malagasy » aza hoe ho fanohanana 100% no atao amin’izany. Samy nilokaloka koa izy rehetra fa vonona hanampy an’ity taranja ity ankoatra ny fiatrehana ny Can koa izy ireo. Voaresaka tetsy Antaninarenina fa ho tsara tantan’ireo mpilalao ny vola voangona amin’ny fanohanan’ny “Club des Partenaires” sy izay mety voaangona amin’ny hetsika “Téléthon” hatao toy ny tany Mauritanie. Tsy misy idiran’izany “basket fund” izany amin’ity hetsika ity.